Korea Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Korea Atsimo
Japana14 Janoary 2019
Etazonia31 Oktobra 2018
Tantara mikasika ny Korea Atsimo
Korea Avaratra 26 Jolay 2020
Hehy 01 Janoary 2019
Mediam-bahoaka 27 Desambra 2018
Fahasalamàna 22 Novambra 2018
Japana 05 Novambra 2018
Anatin'ny lisitr'ireo bilaogy Japoney be mpijery indrindra nalahatry ny "Ninki Blog Ranking" ireo bilaogy ho an'ny renim-pianakaviana te hanampy ny zanany hahomby kokoa eo amin'ny fianarana, ireo hanaraha-maso ny fihetsik'ireo olo-malaza, ireo momba ny sakafo, ary ireo mifantoka amin'ny fifandraisana miharatsy eo amin'i Japàna sy ny mpifanila aminy ao Azia.
Angletera 31 Oktobra 2018
Filipina 25 Oktobra 2018
Korea: Fisamborana an'i Minerva
Fahalalahàna miteny 07 Oktobra 2018
Olo-malazan'ny Aterineto, voasambotra i Minerva nony farany (jereo GV tamin'ny 30/11/2008, anglisy). Ary naparitaka ny mombamomba azy. Nametraka azy ho manampahaizana manokana amin'ny resaka toekarena ireo honohono marobe, manampahaizana manokana amina Tsenambola, na lehilahy iray misahana toerana ambony amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mifanohitra tanteraka amin'ireo tombatombana ireo, fantatra ankehitriny fa telopolo taona ary olona tsy manana asa izy, nahazo diplôma taorian'ny taona roa nanarahany fampianarana ambony.
Hafanàm-po nomerika 15 Aogositra 2018